Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Xanduva » Ukuhamba ngaphaya kwesiXeko saseNew York, kwiKhowudi yeZip yaseManhattan
isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Ukubambisa • Iindaba zeMpilo • Icandelo lokungenisa izihambi • iindaba • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Safety • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba zase-USA ezaphulayo • Iindaba ezahlukeneyo
14 imiz efundwayo
Ndingarhalela ikhabhathi ezaliswe yiPrada kunye ne-LV, kodwa into endiyifunayo NGOKUQHELEKILEYO lithuba lokuhamba ngokukhuselekileyo ngaphandle kweKhowudi yeZip.
Njengoko ndimamele i-MSNBC, i-FOX kunye ne-CNN, ndiyalunyukiswa ngokwahluka kwe-COVID, isidingo esivelayo sokudubula, inani elonyukayo labantu abagulayo kunye nokufa okushiyekileyo ngaphaya komda.
Yiminyaka emibini ndibanjisiwe kwigumbi lam lokuhlala, ndinentloni ndingena esixekweni ndigqunyiwe, ndithintela ukunxibelelana nabantu abadala, abantwana, kunye namajoni omzimba.
Ndizicacisa ngononophelo izinja kunye nezinye izilwanyana zasekhaya, ndithintela unxibelelwano lwam kunyango lwam lomzimba, umqeqeshi wezemidlalo, umgcini wevenkile wevenkile, kunye nomamkeli wedesika wangaphambili kwindawo yokuzivocavoca.
Le AKUKHO INDLELA yokuphila i-COVID!
Khomba umnwe | Ngubani omele abekwe ityala?
Baninzi abasola - ukuqala ngentloko ye- World Health Organization (WHO) owayenamahloni okukhawuleza achonge ubhubhane xa wawubona.
Unobhala Jikelele we-WHO uyalandelwa ngokusondeleyo xa kufikwa kugxekwa ngabaphathi abaphezulu abafumana izigidi zeedola kumzi mveliso wokuhamba ngenqanawa abaxhonywe kakhulu kwimali yabo ukubiza imeko engxamisekileyo-nokuba sele bazisiwe ziingcali zonyango ezinamava. .
Okulandelayo emgceni wabo babekek 'ityala ngabalawuli bezikhululo zeenqwelomoya abaxhalabile kukuxhonywa kwimilinganiselo kunasekutyalweni kwemali yokuphucula iinkqubo ze-HVAC, ukutshintsha ifanitshala kunye nokulungiswa kwezinto ze-antimicrobial okanye ukuzisa iirobhothi kunye netekhnoloji entsha yokwandisa ukusebenza okunganxibelelananga.
Ukubeka ityala kukwangabaphathi beenqwelo moya. Bahlala bekhetha ukufihla iinombolo ze-COVID ngasemva kweencwadana ezicwebezelayo kunye neevidiyo ezibizayo kunokuhlaziya iinkqubo ze-HVAC, ukubuyisela amalaphu kunye nokulungiswa kwemveliso ye-antimicrobial, okanye ukongeza iirobhothi kuluhlu lwabasebenzi.
Ukubaleka ngokulandelelana naba baphathi ziinkokheli zokhenketho ezihlala kwi "submarine etyheli" nanjengokuba zingama-naïve kakhulu okanye zii-myopic kakhulu ukuba zisibone esi sifo njengoko sinqumla imida yabo, iipali zabo, ii-portals, ne-tarmacs, zihlasela amazwe abo kwaye zihlasela abahlobo, iintsapho, kunye neendwendwe. Ukuwela kulo mgxobhozo ngabakhenkethi abamfameke ngendlela engummangaliso ngenxa ye-egos kunye ne-narcissism yokuqonda ukuba ngamanye amaxesha iminqweno kunye neemfuno zilibaziseka ngokulungelwa kwabanye kwaye ngoku ayinakuba lelona xesha lilungileyo lokujoyina i-rally yezithuthuthu okanye ukonwaba kwiqela lezemidlalo kunye namakhulu amawaka abavakalisi abacinga ngokufana.
Umzuzu ngamnye wemihla ngemihla, iingcali zikamabonakude zinesidima sokujongana neekhamera kwaye zixelele izigidi zababukeli ukuba ngaphandle kwazo zonke izilumkiso ezibi, lixesha lokuhamba ngaphaya kokhuseleko oluthandabuzekayo lwendawo esihlala kuyo kwaye siye kwiindawo esiya kuzo sikhula nosulelo lwe-COVID-19 . Abalondolozi bafuna ukuba sityelele iivenkile zabo zokutyela nokuba injani intsholongwane. Umyalezo usikhuthaza ukuba sibambe amakhadi etyala, abantwana, usapho kunye nabahlobo kwaye sichithe iiyure ezimbalwa ezizayo sisela kwaye sela emajukujukwini angenakho ukuba neenkqubo ze-HVAC zikwimeko entle okanye abasebenzi abambethe.
Tishishini lethu lobunkokheliAkakavuma ukuba ezokhenketho, ngakumbi ezokuhamba, zizithuthi zokusasaza izifo; umzi-mveliso kufuneka ube kwindawo ephambili kuthintelo lwezifo- ukuyila nokwenza iinkqubo zempilo nezokhuseleko, iinkqubo kunye neenkqubo. Amagosa aseburhulumenteni ajongene nezokhenketho kufuneka achonge esidlangalaleni iindima zabo noxanduva lwabo, njengoko belunxibelelwano phakathi kwezifo ezisasazekayo kunye nabahlali, zibabeka kwindawo yokuthintela okanye ukuthintela uhambo njengemilinganiselo yokulawula umngcipheko obangelwa kukusasazeka kwentsholongwane.
I-COVID-19 idale imeko yezokhenketho yokungaqiniseki engenakuphela. Nokuba i-COVID-19 ayisosisongelo, iintsholongwane ezintsha kunye nezinye izifo ziya kufumana indlela yokungena kwihlabathi lethu, kwaye kwakhona eli shishini liza kujongana nokungaqiniseki (okt, ixesha leengxaki, imigaqo-nkqubo yenkxaso evela koorhulumente, abakhenkethi indlela yokuziphatha).
Imiyalezo kaRhulumente iyaphoswa
Uphando lubonisa ukuba imiyalezo ye-COVID-19 exhaswa ngurhulumente ayisebenzi (iyabhideka kunolwazi). Imiyalezo ixutywe ngenxa yokuba ingafikeleli kwezona ntengiso kujoliswe kuzo kwaye ayiboneleli ngolwazi olufanayo oluluncedo nolusebenzayo.
Iihotele, ezokuhamba, kunye neenkokheli zokhenketho nazo zixakekile zenza iividiyo ezimibalabala ezinabasebenzi beenqwelo moya kunye nabalungiseleli kwiibhodi zokutyibilika kwiskate; Nangona kunjalo, le miyalezo ayifikeleli kwiimarike ekujoliswe kuzo. Ngoba? Kungenxa yokuba kwimeko yeshishini lokhenketho, abajonganga nabathathi zigqibo abaphambili bokuhamba, abasetyhini, kwaye abaluvumeli uloyiko lwabo lokuhamba ngexesha le-COVID-19.
INew York yile ifuna isatifikethi sokugonya se-COVID-19s phantse yonke into enxulumene nokuhamba.
Xa kufikwa kwimiba yezokhuseleko nezokhuseleko, abasetyhini banzima ngakumbi kunamadoda ngokubhekisele kumanyathelo okhuseleko abayifunayo endaweni ukuba bazokuziva "bekhuselekile" xa beseluhambeni.
Iiprotokholi abazilindeleyo zibandakanya ucoceko olusemgangathweni, ukusetyenziswa kwezibulali-ntsholongwane, ubukho bempilo kunye nokuhlolwa kolwazi ngabaqeqeshi bezempilo abaqinisekisiweyo (okt, oogqirha, abongikazi, abezonyango), izatifikethi ezisemthethweni ezinikezelwa yimithombo ethembekileyo (okt izibhedlele, izikolo zonyango) , kunye nezigqibo zokhathalelo lwempilo ngokusekwe kwidatha yesayensi hayi kwizikhuthazi zemali.
Abasetyhini balindele ukuba iihotele ziya kubonelela ngokucoca okunzulu kunye nabasebenzi abaninzi bokuhlamba izandla. Iindwendwe kunye nabasebenzi kufuneka bazifihle, indawo zoluntu kufuneka zicocwe kwaye zibulawe iintsholongwane kwishedyuli epapashiweyo kwaye zibandakanye iindawo eziqhelekileyo, iindawo zonxibelelwano (okt, iziporo, iitafile, izibambo, iisinki).
Amagumbi omdlalo kufuneka abekho kwisithuba (s) esiza kubulala iintsholongwane kunye neelifti kunye nezinyusi ezizihambelayo. Izinto ezisegumbini ezifana nezinto ezikude zeTV, iiswitshi zokukhanya, kunye neethemostats kufuneka zibe yinxalenye yeenkqubo. Ukuhlawulwa kwazo zonke iinkonzo kufuneka kube ngombane, kunye neziselo ezinxilisayo ezenziwe ngotywala ezikhoyo kumgangatho ngamnye ekungeneni ehotele nakwindawo zokutya / zeziselo. Iibuffets kufuneka zisuswe okanye ziphinde zinikezelwe ukuze kubekhona abasebenzi.
Abasetyhini bafuna ukuhamba kwaye banemali yokuchitha. Amava ohambo anika indlela yokubaleka kwiinkqubo zemihla ngemihla ngelixa ubonelela ngamathuba okunxulumana kwezentlalo kunye nolonwabo lwe-hedonic. Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba abasetyhini balinciphisile ixesha labo lokuhamba kunye nophando (i-Brooks kunye ne-Saad, 2020) bafumanise ukuba i-60% yabasetyhini base-US bafumana uloyiko kunye nexhala lokusulelwa yi-COVID-19. Olunye uphononongo lufumanise ukuba uloyiko, intiyo, kwaye ngamanye amaxesha umsindo ubonakele ngokwempendulo yeemvakalelo ezinxulumene nokukhusela ukhuseleko lwabo lomzimba ngexesha le-COVID-19. Abahambi ababhinqileyo babona umngcipheko wezempilo kwintsholongwane, ubatyhalele ekuphelelweni lithemba ekuhambeni kwexesha kuguquka kube luloyiko. Nje ukuba uloyiko lomngcipheko wezempilo obonakalayo kwintsholongwane lube yimvakalelo ebalaseleyo, bathambekele ekuphepheni isimilo esithile njengokuhamba.
Ukunciphisa uloyiko lwabo lokuhamba, eli shishini kufuneka liphelise indlela yalo yesisele eyahlula icandelo kwaye ivelise imiyalezo exubeneyo. Ngokusebenza ngokubambisana, eli shishini linokubonelela ngonxibelelwano phakathi kwawo onke amacandelo elenza ukuba amava ohambo angoyiki kangako. Ukuhamba ukuya / ukusuka kwindawo ekuyiwa kuyo kufanele ukuba kungabinamthungo, ukusuka ekuthuthweni komhlaba ukuya kwindiza yasekhaya nakwamanye amazwe, indawo yokuhlala, kunye nokutya ngeenkqubo ezisemgangathweni ezibonakalayo ngokucacileyo kulo lonke uhambo.
Icandelo likarhulumente nelabucala elinoxanduva lokhenketho kufuneka babelane esidlangalaleni ngokubona kwabo kunye neengcebiso ngeentlanganiso ezingathintelwanga kwaye zingacwangciswanga ngabacebisi bezonxibelelwano noluntu. Imithombo yeendaba kunye nabathengi kufuneka bazi kwaye baqonde inkqubo yokucinga ngezigqibo ezenziwayo zokuhamba (okanye hayi); ukuvula imida (okanye hayi); ukuseka ukhuseleko, ucoceko kunye neenkqubo zokhuselo (okanye hayi); kwaye ukuba kukho umahluko, izizathu zomahluko.
Zonke iinkokheli zikarhulumente nezabucala kunye nabathengi kufuneka bathathe inxaxheba kuyilo, ukumiliselwa, kunye nokusetyenziswa kweemveliso ezintsha zononophelo lwempilo, iinkqubo, kunye neenkqubo ezinamalungu adityaniswe ngokuthe nkqo nangokuthe tye. Ubunkokeli kufuneka buvele kolu shishino, ngokusekwe kubuchule kwaye hayi kunxibelelwano lukarhulumente okanye kwimpembelelo yobuqu, okanye kubutyebi.
Ukunciphisa uloyiko kunye nokunciphisa umngcipheko onxulumene nohambo lwe-COVID, icandelo kufuneka:
1. Jongana nawo onke amathuba awaziwayo okusasazeka kwentsholongwane (ukuvavanywa kwempilo yeendwendwe kunye nabasebenzi mihla le).
2. Ufuna ubungqina bokugonywa kweendwendwe ngaphambi kokwamkela ukubhukishwa nokubhaliswa.
3. Ukunyanzela ukudityaniswa kwezentlalo kuyo yonke indawo ekufikelwa kuyo neendawo zokuhlala.
4. Beka imiqobo ebonakalayo phakathi kwabahambi, iindwendwe, kunye nabasebenzi.
5. Thintela ukuxinana kwabantu kwizikhululo zeenqwelo-moya, kwiinqwelomoya, kwiindawo ezinomtsalane, kwimisitho, kwiivenkile zokutyela nakwiihotele.
Isiqhelo esitsha iya kuba kukulinganisa phakathi kokugcina amava anelisayo kubakhenkethi kunye nokuthobela amanyathelo angqongqo athathwe ngabasemagunyeni kukhuseleko kunye neenkqubo zempilo.
Ingqondo yam yenziwe
Ukuba zonke izilumkiso kunye "nokuba bekuthini" khange ziqiniseke… ukuhlehlisa uhambo, imibuzo efuna iimpendulo ngaphambi kokunikezela ngamakhadi etyala kwiiarhente zokuhamba zibandakanya:
1. Lithini inqanaba le-COVID-19 ekusasazeni kwindawo ekuyiwa kuyo? Ngaba amanani osulelo kunye / okanye ukusweleka aphezulu okanye ezantsi?
2. Lithini inqanaba le-COVID-19 ekusasazeni kwindawo ohlala kuyo?
3. Ngaba uya kuba nakho ukuzikhwebula (ngeenyawo ezi-6 ubuncinci) kubantu ohamba nabo?
4. Ngaba abahlobo bakho / usapho lwakho lusemngciphekweni omkhulu we-COVID-19?
5. Uhlala nomntu o-COVID-19 osemngciphekweni omkhulu?
6. Ingaba urhulumente okanye uburhulumente wengingqi ohlala kuyo kunye / okanye apho uya khona ufuna ukuba uhlale wedwa iintsuku ezili-14 emva kohambo?
7. Ukuba ugula yi-COVID-19, ngaba kuyakufuneka uphoswe ngumsebenzi okanye ezinye iimbophelelo?
8. Ukuba uyagula xa useluhambeni, zithini iinkqubo zomgaqo-nkqubo ezifunwa ngurhulumente wasekhaya (s) kwaye sikwintoni isikhundla sezempilo (izibhedlele, oogqirha, amayeza) kwindawo oya kuyo? Ngaba i-inshurensi yakho iya kuzihlawula ezi ndleko?
Ukuba indlela yakho yokuhamba iyimoto, ukucwangciswa kwangaphambi kohambo kufuna ukucocwa ngokucokisekileyo kunye nokubulala iintsholongwane kwisithuthi. Yonke indawo kufuneka isulwe (iifestile, amabhanti ezihlalo kunye namabhaksi, ivili lokuqhuba, izibambo zeminyango, ulawulo, imigangatho, njl. Ukongeza kumashwamshwam kunye namanzi, yiba nesipele sonikezelo lokusula i-antibacterial kunye nezokucoca izandla. Xa wonke umntu esemotweni, gcina iifestile zivulekile xa kunokwenzeka. Ukuba oku akunakwenziwa, sebenzisa i-A / C kwaye usete umoya ongenisa umoya kwimo engeyiyo yokubuyela umva.
Nciphisa inani labantu abahamba ngemoto enye kwaye wenze amalungiselelo okuba wonke umntu anxibe imaski (apho kufanelekileyo, hayi njenge-chinaper diap). Ukumisa irhasi okanye amashwamshwam? Chonga imbaleki yegesi kunye / okanye amashwamshwam - umntu ongekho semngciphekweni omkhulu. “Iimbaleki” kufuneka zigutyungelwe ngokupheleleyo kwaye zicocekile / zicocekile izandla ngaphambi kokubuyela emotweni.
EyoMqungu 21, 2021, umthetho owamiselwa ngurhulumente womanyano wagqiba kwelokuba “kukwaphula umthetho womanyano ukunganxibi maski kwizithuthi zikawonke-wonke (Izikhokelo zeCDC). Zonke iinqwelomoya ezihamba ngenqwelomoya kufuneka ukuba abakhweli banxibe imaski yobuso (kubandakanya abantwana abaneminyaka emi-2 nangaphezulu). ”
Suthemba namnye! Awunalo nofifi lokuba ngubani ohleli ecaleni kwakho, phambi kwakho, kunye nemiqolo emi-3 emva kwakho - ke MASK! Ukongeza, gcina izandla zicocekile kwaye uphephe ukuthinta umphezulu, ubuso bakho, kunye namanye amalungu omzimba wakho.
Ngamajelo eendaba kunye noononophelo lwempilo bacebisa imisebenzi yangaphandle, ukuya epakini kuye kwanda. Ukuba uthatha isigqibo sokubhalisela unyango lwamahlathi, chonga iipaki ezikufutshane nasekhaya (zithathwa njengezinobungozi obuncinci) kwaye unxibelelane nolawulo lwepaki ukumisela ukuba ngaba iziko lidibana nemigaqo ye-COVID enezindlu zangasese ezivulekileyo nezicocekileyo (kubandakanya amanzi abalekayo, iphepha langasese, isepha, kunye netawuli ezilahlwayo). Ngaba iindawo zokudlala zivulekile kwaye zidibana nezikhokelo zeCDC zomgama nococeko? Ukuba ipaki inikezela ngamachibi okudada, iibhafu ezishushu, okanye ezinye iindawo zokudlala ezisebenzisa amanzi, zeziphi iinkqubo ezisetyenziselwa ukugcina iindwendwe zikhuselekile kwaye i-COVID-19 isimahla?
Ukuba wena kunye / okanye amaqabane akho ohambo uyagula, kuvavanyiwe ukuba unentsholongwane okanye kutsha nje ubonakalisiwe kwi-COVID-19 - UNGAYI, kwaye nokuba imeko yezempilo injani, ungaze uhambe rhoqo epakini enabantu abaninzi.
Iihotele / iiBnB
Phambi kokwabelana ngolwazi lwekhadi lokuthenga ngetyala ukugcina igumbi, phanda ihotele okanye inkqubo yokucoceka kwepropathi (iimveliso ezisetyenzisiweyo, amaxesha okucoca, ukuba abasebenzi bagqunyiwe kwaye bavalwe, kuya kubakho iiyure ezingama-24 ezingenanto emva kokuba undwendwe lunye luhambile, kwaye uhlala isithuba?).
Mhlawumbi kungcono ukucoca indawo yakho (ukuze uqiniseke). Yiza nezinto zakho zokucoca ozithandayo kwaye ucoce indawo phambi kwakho nabahlobo / nosapho bahlala kwisithuba.
Ukuba uthatha umngcipheko kwaye ucwangcise ukuhamba ngaphandle kokufumana iprotocol yokugonya, fumana uvavanyo lwentsholongwane kwiintsuku eziyi-1-3 ngaphambi kokuhamba. Nxiba imaski kuzo zonke izithuthi zikawonke-wonke kunye neendawo zangaphakathi (kubandakanya izikhululo zeenqwelo moya kunye nezikhululo zikaloliwe). Gwema izihlwele kwaye uhlale ubuncinci iinyawo ezi-6-ukusuka kuwo wonke umntu. Hlamba kwaye uhlambulule izandla zakho rhoqo ngesixhobo sokucoca ngesandla esine-60 yeepesenti yotywala. Ukuvavanywa kufuneka kuphindwe emva kweentsuku ezi-3 ukuya kwezi-5 emva kohambo kwaye ukulungele ukuhlala ekhaya nokuzimela ngokwakho ubuncinci iintsuku ezi-7 emva kohambo… nokuba uvavanywe ungenalo. Ukuba uvavanyiwe une-HIV, zahlule kwabanye ukuze ukhusele abanye. Ngaba awulungelanga ukuvavanywa kwakhona? Hlala ekhaya wedwa wedwa kangangeentsuku ezili-10 emva kokubuya kuhambo.
Ulwazi oluhlaziyiweyo lokuhamba, umthombo olungileyo ngu: https://travel.state.gov/content/travel/en/traveladvisories/COVID-19-Country-Specific-Information.html
© UGqirha Elinor Garely. Inqaku lelungelo lokushicilela, kubandakanya neefoto zokwenyani, azinakuphinda ziveliswe ngaphandle kwemvume ebhaliweyo evela kumbhali.
Abazimasi be-IMEX baseMelika Bakha iClubhouse ekhethekileyo ye...
I-United Airlines: Kumkhondo wokuhlangabezana neethagethi ezingama-2022
I-Qatar Airways ibambe iNtlanganiso kaWonke-wonke yoNyaka yama-54...
Indlela yokunyanga i-insomnia kunye ne-anti-anxiety?
I-United Airlines: Fumana i-COVID-19 jab okanye ulahleke
Ikopi eneminyaka engama-400 ubudala yeMona Lisa iza kuthengiswa eParis
Intlanzi kaKathy uthi:
Agasti 23, 2021 kwi-10: 52
Ukuba le mithetho kunye nezicelo zilandelwe, umhlaba ungangcono.